မသိသေးသောသူများအတွက် Facebook A/C လော့ကျရှင်းတမ်း..... - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Facebook နည်းပညာများ မသိသေးသောသူများအတွက် Facebook A/C လော့ကျရှင်းတမ်း.....
မသိသေးသောသူများအတွက် Facebook A/C လော့ကျရှင်းတမ်း.....
Thiha Htike at 5:43:00 AM Facebook နည်းပညာများ,
ဒီဆိုဒ်မှာလည်းတင်ပေးပြီးသားဖြစ်သလို အခြားသောတဆိုဒ်များလည်းတင်ပေးထားပြီးသားပါ ကျွန်တော့်ဘလာ့ခ်လေးမှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ် သွားကြည့်လိုက်ပါ ဒီမှာနှိပ်လိုက် ဒါပေမဲ့မေးသူများတော့လည်း ဖြေပေးရတော့တာပေါ့ဗျာ ဆရာကြီးများ မူပိုင်စာရေးသူများကို Credit ပေးပါတယ် ကျွန်တော်ဘာလို့မရေးတော့တာလည်းဆိုတော့ အခုအောက်က နည်းတွေနဲ့တင်ပြည့်စုံနေပါပြီ ဒါကြောင့်ပါ ကဲစလိုက်ကြစို့..
ဘာလို့ Lock ချတာလဲ????????????
အကောင့် လော့ကျတဲ့အခါ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းပါ လိမ့်မယ်။ ဒါကိုတော့ ကာယကံရှင် လူတိုင်းကြုံ တွေ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်ရမှ အကောင့်ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ ပြောထားပြီး နီးစပ်ခင်မင်ရာ သူငယ်ချင်း ဖုန်းနံပါတ် ငှားလိုက် တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ အသိတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြုပြီး အကောင့် ပြန်ရတာမျိုး အနည်းငယ်ရှိပေမယ့် ဒါက ရေရှည်မကောင်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆို Facebook ဟာ ယင်းဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်သားလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ယခုလို Lock ကျတာမျိုးတို့ Hack ခံရတာမျိုးနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ယင်းဖုန်း နံပါတ်နဲ့ အမြဲပတ်သက်နေရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကလည်း အမြဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အကောင့်လော့ကျတဲ့အခါ အကောင့်ကို ဘာမှ မသုံးပဲ ၄၈ နာရီ (၂ ရက်တိတိ) ဒီတိုင်းထားပါ။ ၁ရက်ခွဲလည်း ရပေမယ့် Facebook က ၂ ရက်လို့သတ်မှတ် ထားတဲ့ အတွက် သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ Step အတိုင်းသွားတာ ကောင်းပါတယ်။
အဲလိုမဟုတ်ပဲ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ ထိုင်ကလိနေရင်တော့ သတ်မှတ်ရက်ထက် ပိုကြာသွားနိုင်ပါတယ်။
၂ ရက် (၄၈ နာရီ) ပြည့်ပြီဆိုမှ အကောင့်ကို ယခင်ထုံးစံအတိုင်း Log In လုပ်ပါ။ ဒီမှာ Internet Explorer ကို အသုံးပြုဖို့ ပိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ Mozilla Firefox၊ Google Chrome, Safari အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေတ်စားနေတဲ့ Browser များဟာ Security မြင့်မားပါတယ်။ Internet Explorer ကတော့ တားမြစ်ထား တာ သိပ်မရှိပါဘူး။
အချို့  ဝဘ်ဆိုဒ်များက Right click Disable လုပ်ထားတာတောင် Internet Explorer မှာ ရတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲ Download ဆွဲဆွဲ Internet Explorer မှာ အတားအဆီး နည်းတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ သုံးဖူးသူ တိုင်းသိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Account ကို Log In ဝင်ရန် Internet Explorer ကိုအသုံးပြုစေလိုပါတယ်။ Mozilla Firefox, Chrome တို့လည်း အသုံးပြုမရလို့ မဆိုလိုပါ။ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အကြောင့် အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုန်း Message box ပြန်ပေါ်လာမှာ စိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလို Log In ဝင်ပြီးပြီဆိုပါဆုိ့။ သူက Password မေ့သူတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Verification step တွေလာပါ တယ်။ ဘာမှမပါပါဘူး။ သူငယ်ချင်း နာမည်ကို မှန်အောင် ရွေးခိုင်းတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံနဲ့ လူအမည်နဲ့ တွဲပေးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတိထားစေချင်ပါတယ်။
ဒီမှာ ၅ ခုလောက်တွဲခိုင်းပါတယ်။ မရတဲ့ဟာဆိုရင် ရဲရဲကြီး Skip လုပ်ပါ။ အမှားများရင်တော့ အကောင့်ကို ထပ်မံ Lock ချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မရတာတွေကို Skip လုပ်လိုက်တဲ့အခါ မေးခွန်းမပြည့်ပြည့်အောင် မေးပေး တာ Facebook ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်တစ်ခါ ထပ်မေးပါတယ်။
ဒီမှာလည်း မရတာ Skip လုပ်ပြီး သေချာမှာ Submit လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ လူရွေးခိုင်းတဲ့ Step ကို တစ်ခါရှုံးပြီး နောက်တစ်ခါ ထပ်ရှုံးရင်တော့ နောက်မှ ပြန်လာတော့လို့ စာတန်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Log out လုပ်ပြီး နောက်တစ်ခါ Log In ဝင်၊ အထက်ပါ လူရွေးတဲ့ မေးခွန်းကိုပဲ ဆက်တိုက် ပြန်လည်ဖြေဆိုပေးခြင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းနည်းပြီး ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းများရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရှုလေ့ရှိသူများအတွက် အိုကေပေမယ့် သူငယ်ချင်း ထောင်ချီရှိပြီး မမှတ်မိဘူးဆိုရင်တော့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ သူငယ်ချင်းများလေလေ Facebook က အခွင့်အရေးများများပေးလေ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါဖြေမရ၊ နှစ်ခါ ဖြေမရရင် ထောင်ချီ Friend List ရှိသူများ ကို နောက်ထပ် ဖြေခွင့် ပေးတတ်ပါတယ်။
ဖြေပြီးလို့ အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ Account ပြန်လည် ရရှိပါပြီ။ ဒီမှာ အကောင့်ပြန်ရပြီ ဆိုပြီး အရင်ကလုပ် နေကျ အတိုင်း Like, Comment , Post, Link , Message စတာတွေကို ထင်တိုင်းမကျဲသင့် သေးပါဘူး။ သေချာတာကတော့ Friend Request ၄ ရက်ပိတ်ထားပါတယ်။ Message လည်းပို့ခွင့် မရပါဘူး။
အရင်က Activity တစ်ခုခုလုပ်တိုင်း Warning တွေတက်တက်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှ တစ်ခုထပ်ဖြည့်စွက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်..friend ဖြည့်တဲ့နည်းဟာ လွယ်တယ်ထင်ပေမဲ့ သိပ်လွယ် ကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး..သူမေးထားတဲ့ ပုံနဲ့ လူငါးယောက်ကို မှန်အောင် ဖြည့်ရပါတယ်…အချိန်အကြာကြီးယူဖြည့်လို့မရပါဘူး.
အချိန်ကြာသွားရင် မှန်ပေမဲ့လဲ အကောင့် log ပွင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
TechSpace Journal မှကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
ဖုန်းမှာ " Telenor Phone Card " ကို ဖုန်း ရဲ့ " Sim card Slot (1) " မှာထည့်ုပြီးအသုံးပြုရမှာပါ။ပြီးလျှင် အကောင့် " Lock " ဖြေရန် Facebook တွင် lock ကျနေသော အ
ကောင့် ကို ၀င်ပါ။
ဒါဆိုရင် အောက်မှာ ပြထားသလို " Please Verify Your Identity " ဆိုတဲ့ Page ပေါ်လာပါလ်ိမ့်
မယ်။ ဒီအဆင့် က အကောင့်အသစ် ပြုလုပ်လည်း ပေါ်လာမှာပါပဲ။ ပုံမှာ အနီဝိုင်းပြထားတဲ့ အတိုင်း
" Continue " ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် ကတော့ စာလုံး တူရိုက်ပေးရမှာပါ။ မခက်ပါဘူး၊ သူပြထား တဲ့ အတိုင်း စာလုံး
တွေကို " Text in the box: " ဆိုတဲ့ အကွက်လေး မှာ တူအောင် ရိုက်ပေး လိုက်ပါ။ ပြီး လျှင် အပြာရောင်
" Continue " ဆိုတဲ့ Button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။သူပေးထားတဲ့ အတိုင်း မတူရင်တော့ နောက်တစ်ခါ
စာလုံးမှန်ရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့" Phone Numbers " တောင်းတဲ့ အဆင့် ကို
ရောက်ပါပြီ။ပုံမှာအနီရောင် ၀ိုင်းပြထား တဲ့အတိုင်း " Enteramobile number " ဆိုတဲ့ အပြာရောင်
Button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် တော့ ဖုန်းနံပါတ် ထည့်ရမယ့် box ပေါ်လာပြီပေါ့။ Country code မှာတော့" Myanmar (+95)"
ကိုပဲ ရွေးပါ။ Phone number အကွက်မှာတော့ စောစောက "Sim card slot (1) " မှာထည့်ထားတဲ့ " Telenor Phone Number " ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ (ဥပမာ- 097997* * * * *) ။ (*) နေရာမှာ မိမိတို့ 
Telenor Phone Number ကိုထည့်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း အပြာရောင် " Continue " ကို
ကဲ.... " Confirmation Codes " တောင်း တဲ့ Box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အောက်မှာ ပုံနဲ့ ပြထားပါ
Computer မှာ "Confirmation Codes " ထည့်ဖို့Box ပေါ်လာသလို သူငယ်ချင်းတို့ဖုန်းကိုလည်း
အောက်မှာပြထားသလို " Facebook Confirmation codes " ပါတဲ့ Message တစ်စောင် ရောက်နေပါ
လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က Resend Codes ကို ထပ်နှိပ်မိလိုက်လို့နှစ်စောင် ဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီ message
ထဲကမှ အပြာရောင် ဂဏန်းလေးတွေ ဟာသူငယ်ချင်းတို့မျှော်နေတဲ့ " Facebook Confirmation Codes"
ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ confirmation codes ကို မှတ်သားပါ။
ဖုန်း message ရ တဲ့ Confirmation codes ကို Computer က "Enter Your Confirmaton Code" ဆိုတဲ့ Box မှာ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ရိုက်ပြီး အပြာရောင် " Confirm " ဆိုတဲ့ button ကို နှိပ်
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း " Number confirmed " ဆိုတဲ့ Text box လေး ပေါ်လာပါလိမ့်
မယ်။ အပြာရောင် " Save Settings " ဆိုတဲ့ button ကို ထပ်နှိပ်ပေးပြီး ခဏစောင့်ပေးပါ။အောက်တွင် ပုံ
Internet လိုင်း ကျသည့်အချိန် နှင့် တိုးရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းတဲ့ အဆင့် ကို ပြန်ရောက်သွား
တတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ထပ်ထည့်စရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ Web page ကို Refresh လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Internet လိုင်းကောင်း ရင်တော့ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း " Thank You " ဆိုတဲ့ message
box လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပေါ်လာလျှင် ပုံမှာပြထားသည့် အတိုင်း အပြာရောင် " Okay " Button
ပုံ-(၁၀) မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း "Okay" Button ကို နှိပ်ပြီး ရင် တော့ အကောင့် Lock ကျတာကို
ဖြေရှင်းပြီး သွားပါပြီ၊ ပြုလုပ်စ အကောင့် အသစ် ဆိုရင်တော့ အကောင့် Information တွေ ဖြည့်ဖို့ အ
တွက် " Step (1),(2),(3) ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အကောင့်အဟောင်း ဆိုရင် လည်း မိမိတို့အ
ကောင့် "Home" ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်
စာအုပ်ကိုရေးသားသူက www.sayyoethe.blogspot.com ဘလော့ဂ်ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ပုံမှာလဲ မြင်နိုင်ပါတယ်။
အခု မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တယ်လီနော်ဖုန်းကို အသုံးပြုပြီး ဖေ့ဘုတ်က ဓါတ်ပုံအတည်ပြုချက်လော့ခ်ကျတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသွားပုံကို ရေးသားထားသော စာအုပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနော်ဖုန်းက International SMS ကို လက်ခံတယ်ဆိုကတည်းက ဖေ့ဘုတ်လော့ဂ်ကျတာကိုလည်း အဲ့ဖုန်းနဲ့ လော့ခ်ပြန်ဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်မှာပါတဲအတိုင်းပါပဲ အရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့က ဖေ့ဘုတ်က ကုဒ်ကိုရအောင် Talk at One, Text Free , UppTalk စသော ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့ရတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေဆီကို ကုဒ်က မပို့တာမျိုးဖြစ်တက်တယ်ဗျ။
အခုတော့လည်း မဆိုးဘူးပေါ့ဗျ။ ကိုယ့်ဘာသာ တယ်လီနော်ဖုန်းလေးဝယ်ပြီး ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကို စိတ်ကြိုက်ဖွင့်နိုင်တာပေါ့နော့်။
ကဲ့ လိုအပ်သူများအတွက် ကျွန်တော်မျှပေးလိုက်ပါတယ်။
စာအုပ်ဖိုင်ဆိုဒ်က 3.42 MB ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာတော့ တောထဲရောက်နေတဲ့အတွက် တယ်လီနော်လည်း မသုံးရပါဘူး။ ဘယ်တော့မှ သုံးရမလဲ မသိပါဘူးဗျာ။ အိုင်ပီစတားနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားကရမှာပေါ့နော့်။
Facebook Account အသစ်ဖွင့်နည်းလေးကိုမသိသေးတဲ့သူမျာအတွက်ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရင်လဲမြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီး Verify လုပ်လို့ရပါပြီး။
ဒီ Add-ons လေး ကို Firefox Browser ထဲကိုInstall လုပ်လိုက်ပါ။
Add-on Link - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/anonymox/?src=search
Add-ons ကို install လုပ်ပြီးရင် Firefox ကို Restart လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Firefox add-ons Manager ထဲက Anonymox add-ons ကိုတွေ့ပါမယ်
ပြီးရင် ip address ကို www.whatismyip.com မှာသွားစစ်လိုက်ပါ။
Country မှာ USA လို့ပြရင်ရပါပြီ။
Firefox မှာ Error တက် နေ ရင်
Firefox > Options > Options > Advanced Tab > Network > Connection Setting > Use System Proxy Setting ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
www.facebook.com မှာAccount အသစ်အလွယ်တကူဖွင့်လ်ို့ရပါပြီ။
Lock ကျ နေတဲ့ Account များလဲဒီနည်းနဲ့ ဖြည်လို့ရပါတယ်။
Country ကို Myanmar ရွေးပေးပါ။
Ph no- 959xxxxxxx(eg- 9595196032 ကိုယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါ။)
SMS ပို့တာမရွေးပဲ ဖုန်းခေါ်တာကိုရွေးပါ။FaceBook ကဖုန်းခေါ်ပြီး Code no ပြောပါလိမ့်မယ်။
ဒီကောင်လေးကတော့ Facebook ပြသနာနဲ့ပါတ်သတ်တာ တွေကိုအားလုံးကို စုပီး Apk
လေးလုပ်ထားတာပါ.. မိမိဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်လိုက်ယုံနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လို ဖတ်လို့
ရပါပီ. အောက်မှာဒေါင်းယူပီး သုံးကြည့်လိုက်ပါဗျာ.
ဒါဆိုတော်မတော်များများအဆင်ပြေပါတယ် ကြံတဲ့နည်းတွေကတော့ ညဏ်ထည့်ပြီးသာဖြေပေတော့ပေါ့ဗျာ..:P
အဲဒါနဲ့ပြောမှာကျံသွားလို့ ကျွန်တော်ဆိုရင် အိမ်ဖုန်း 01-???? or MPT ,09-86,09-49 တို့နဲ့ FB လော့ဖြည်ဖွင့်ပေးသဗျ .. တစ်ခါတစ်လေ မအားတဲ့အခါဆို Mark Zuckerberg ဖုန်းခေါ်ရင် မအားသေးလို့ပြီးမှခေါ်ပါဆိုပြီးပြောခိုင်းရသေးတယ် ..